Ungazivimba njani iiNjini zokuKhangela kwi-Indexing WordPress | Martech Zone
Ungazivimba njani iiNjini zokuKhangela kwi-Indexing WordPress
NgoMgqibelo, uJanuwari 23, 2021 Lwesine, Matshi 24, 2022 Douglas Karr
Kubonakala ngathi wonke umxhasi wesibini esinayo inendawo yeWordPress okanye ibhlog. Senza itoni yophuhliso lwesiko kunye noyilo kwiWordPress- yonke into eyakha iiplagi kwiinkampani ekuphuhliseni usetyenziso lokuhamba kwevidiyo kusetyenziswa iinkonzo zamafu eAmazon. WordPress ayisoloko isisombululo esifanelekileyo, kodwa iyaguquguquka kwaye siyilungile.
Amaxesha amaninzi, sibeka iisayithi kwindawo ukuze abathengi bethu bakwazi ukujonga kuqala nokugxeka umsebenzi ngaphambi kokuba siwubeke bukhoma. Ngamanye amaxesha siye singenise umxholo wangoku womthengi ukuze sikwazi ukusebenza kwindawo yokwenyani enomxholo obukhoma. Asifuni uGoogle adideke ukuba yeyiphi na indawo yenene indawo, ke thina zingasebenzi iinjini zokukhangela ukusuka kwisalathiso sesiza kusetyenziswa ubuchwephesha obuqhelekileyo.
Indlela yokuVimba iiinjini zokuKhangela kwiWordPress
Gcina ukhumbule ukuba ibhloko inokuba namandla kakhulu ixesha. Kukho iindlela zokuvimba i-injini yokukhangela ekufikeleleni kwindawo yakho… kodwa into esiyenzayo apha kukubuza nje ukuba bangabeki indawo kwiziphumo zabo zokukhangela.
Ukwenza oku ngaphakathi kwi-WordPress kulula. Kwi Useto> Ukufunda imenyu, unokujonga nje ibhokisi:
Ungazivimba njani iiNjini zokuKhangela usebenzisa iRobots.txt
Ukongeza, ukuba unokufikelela kwingcambu yewebhu indawo yakho ekuyo, unakho lungisa iirobhothi zakho.txt fayile kwi:
Umenzeli-arhente: * Ungavumeli: /
Uhlengahlengiso lweerobhothi.txt luya kusebenza kuyo nayiphi na iwebhusayithi. Kwakhona, ukuba usebenzisa iWindowsPress, i Inqanaba lePlagi ye-SEO SEO yenza ukuba kubenakho ukuhlaziya ifayile yakho yeRobots.txt ngokuthe ngqo kumdibaniso wabo… nto leyo elula ngokulula kunokuzama i-FTP kwindawo yakho kunye nokuhlela ifayile ngokwakho.
Ukuba uphuhlisa usetyenziso olungagqitywanga, isoftware yokubeka kwindawo eyahlukileyo okanye isizinda esingezantsi, okanye ukwenza indawo ephindiweyo ngesizathu esithile - kulungile ukubhloka iinjini zokukhangela kwisalathiso sendawo yakho kwaye uthathe abasebenzisi beinjini yokukhangela kwindawo engeyiyo!
tags: ibhloko yokubambaibhloko ledadavimba iinjini zokukhangelaisikhundla se-math SEO pluginiirobhothi.txtWordPressuseto lokufunda lwegamauseto lwegama
Umenzi woopopayi: Yenza ngokwakho isiTudiyo soopopayi, uMhleli weVidiyo yokuThengisa, kunye noMakhi weNtengiso yeVidiyo
Uqeqesho lweMarket Digital